Maanchister Siitii 2-2 Tootenhaam: 'Murtoo VAR fudhachuu qabna' - BBC News Afaan Oromoo
Maanchister Siitii 2-2 Tootenhaam: 'Murtoo VAR fudhachuu qabna'
Goodayyaa suuraa Taphoota 16 booda Maanchister Siitiin dorgommii Piriimeligiin qabxii gate.
Leenjisaan Maanchister Siitii Pep Gaardiyoolaan galchii 3ffaa Gabri'eel Yesus lakkofsiisee murtoo VAR'n haqamteen booda murticha akka fudhatan himan.
Galchi daqiiqaa xumuraa irratti lakkaa'amte sun harka Ayeemirik Laapporti tuqxee darbuu namootni hedduun waan dursanii hubatan hin fakkaatu. Gammachuu isaanii haalli itti ibsatanis adda ture.
Pep leenjisaa Tootenhaam, Poochetiinootti siquun yeroo galchii sadaffaan haqamuuf jedhu, ''Poch, maaltu tahe? waan uumame argitee turee?'' jedhan.
Leenjisaan Tootenhaam ammoo ''Pep waanuman arge tokko iyyuu hin qabu. Maal akka tahes hin hubanne'' jedhan. Hamma murtoon VAR ifoomsamutti.
''Murticha fudhachuu qabna'' jedhe Pep. Galchii jalqabaa Raahim Isterliingi akkuma lakkoofsiseen Erik Laameelaan fageenya irraan wal qixxeesse.
Teknooloojii VAR Pirimeer Liigii keessatti
Liivarpuul waancaa Suppar Kaappii injifate
Lukaas Mooraan akkuma dirree seeneen sekondii 27 keessatti galchuu lakkofsisee wal qixxeesse.
Serjiyoo Aguweeroon ammoo tapha piriimerliigiin dirree Maanchister Siitii irratti qofa galchii 97ffaa isaa lakkofsise.
Alen Shiirer rikardii dirree tokko irratti galchii hedduu lakkofsisuu galchii 97'n qabatee ture.
Galchii Raahim Isterliingi kanaan dura dorgommii Shaamipyoonsi Liigii irratti Tootenhaam irratti lakkoofsises akkasuma yeroo Bernaardo Silvaa kubba dabarsu Serjiyoo Aguweeroo taphaan ala [Offside] jedhamuun VAR'n ilaalamee haqameera.
Seerri kubbaan yeroo harka tuqu bahe haaraan namatti hin tolu kannen jedhanis jiru. Kanaan dura osoo hin beekiin yoo tuqe akka balleessaatti hin ilaalamu ture. Seera haaraa baheen garuu beekaas tahu osoo hin beekiin yoo tuqe addabbii kennisiisuu danda'a.
Aguweeroo fi Gaardiyoolaan miiraan osoo walitti dubbatani argamaniiru.
Aguweeroon jijjiramee bahuu isaatti waan gammade fakkaachuu baatus dhimmichi garuu galchii lammaffaan yeroo lakkaa'amu balleessaa Aguweeroon akka tahetti Pep waan itti mufate waan isatti fakkaateef tahuu Pep Gaardiyoolaan ergasii dubbateera.
Miira Aguweeroo hundi keenyayyuu beekna jedhe. Ani baay'een isa jaaladha jedhe Pep.
Tapha torban lammaffaa kanaan
Arsenaal 2 fi 1 Barnileey
Aston Viillaa 1 fi 2 Barnimaawuz
Biraayitan 1 fi 1 West Haam
Everteen 1 fi 0 Waatfoordi
Noorwiich 3 fi 1 Niwukaastil
Saawuzhampitan 1 fi 2 Liiverpuul
Maanchister Siitii 2 fi 2 Tootenhaam wal-injifataniiru.
Har'a Leenjisaa haaraa Fraank Laampaardiin kan durfamu Chelsiin dirree isaa irratti Leester Siitii waliin morkata.
Bor taphni Maanchister Yuunaatitid fi Wolvis ni eegama.
Teknooloojii VAR Pirimeer Liigii keessatti: Taphoonni dhumatorbee jalqabaa akkamiin dabran?